Madaxweynaha Galmudug oo Gaalkacyo ku soo laabtey kana hadley safarkiisii Muqdisho – SBC
Madaxweynaha Galmudug oo Gaalkacyo ku soo laabtey kana hadley safarkiisii Muqdisho
Wafdi balaaran oo uu hogaaminayo Madaxweynaha Galmudug Mudane Maxamded Axmed Caalin ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Gaalkacyo ee Caasimada Galmudug.
Wafdiga Madaxweyne Caalin ee dib ugu soo laabtay Magaalada Gaalkacyo ayaa waxaa ku weheliyay gudoomiyaha baarlamanka galmudug, gudoomiye kuxigeenka 1aad ee Baarlamanka,Wasiiro iyo Xildhibaano katirsan Maamulka Galmudug.
Madaxweyne Caalin iyo wafdiga la socda oo garoonka diyaaradaha ee magaalada gaalkacyo ay si weyn ugu soo dhaweeyeen masuuliyiin katirsan Maamulka Galmudug iyo dadweyne farabadan ayaa dhawaan magaalada Muqdisho uga qayb galay shirkii wadatashiga ee Qaramada Midoobay ay soo qaban qaabisay.
Masuuliyiintii uu hogaaminaayay madaxweyne maxamed Axmed Caalin ayaa loo soo galbiyay hoyga uu magaalada Gaalkacyo ka daganyahay halkaas oo uu shir jaraa,id ugu qabtay saxaafada kagana warbixiyey wixii uga soo qabsoomay Shirkii ay kaqayb galeen magaalada Muqdisho ee looga hadlaayay aayaha dalka Soomaaliya xilga kala guurka .
Madaxweyne Maxamed Axmed Caalin waxa uu sheegay in qodabadii ka soo baxay shirkii wadatashiga ay ahaayeen kuwo la isku raacay islamarkaaana uu rajeynayo in ugu danbeyn mushkilada Soomaaliya ay soo afjarmi doonto,waxana uu sheegay in ka qayb galkii shirka wadatashiga uu galmudug u ahaa guul usoo hoyatay maadaama uu ku soobeegmay xili Galmudug labalaariyay islamarkaana la dhamaystiray dhamaan xubnihii wasiirada, ayn bogaadin kala kulmeen dhamaan masuuliyiintii ay isku arkeen magaalada Muqidho.
Ugu danbeeytii ayaa madax weeynuhu sheega ineey dadaalo dheeraada ay kasameey nayaan galmudug sagoo carabka ku dhufay abniga waxbarashada beeraha abaaraha iyo kuwo kale
Liibaanh C/laahi Faarax Qaran